Inona no vaovao ao amin'ny Libreoffice 4.0 | Avy amin'ny Linux
Inona no vaovao ao amin'ny Libreoffice 4.0
Hatramin'ny herintaona lasa izay TDF dia nandray io teknika io ihany kanônika mamoaka kinova iray isan-taona amin'ny LibreOffice, havaozina isaky ny 6 volana. Ka arak'ity drafitra ity dia ho vonona amin'ny aprily taona ho avy ny kinova 4 an'ny LibreOffice.
Fa ny zavatra vaovao miaraka amin'ny LibreOffice dia efa navoaka ary eto no itondrako azy aminao:
Avelao hametaka ny hevitr'ireo andian'ny lahatsoratra ao anaty rakitra. +
Avelao ny fetra amin'ny teny fanampiny. Io fiasa io dia tsy miraharaha ny tsipika lava (-) sy ny tsipika fohy (-) ho endri-tsoratra perimeter amin'ny heviny amin'ny fanisana teny, ary mamela ny mpampiasa hamaritra litera hafa amin'ny teny
Manafatra fanamarihana avy amin'ny antontan-taratasy .docx sy .rtf (Azo ampiasaina rehefa mampiasa Word amin'ny takelaka)
Import / Export fanohanana avy amin'ny fitenenana matematika RTF tompon-tany
Avelao ny lohateny sy tongotra amin'ny pejy voalohany fa tsy mampiasa fomba pejy hafa.
Fiasa XOR vaovao dia miasa araka ny voafaritra ao amin'ny ODF
Fanatsarana ny fampidirana rakitra SAO
Safidy fanamboarana vaovao hanovana ny fikirakirana tady poakaty rehefa ampiasaina amin'ny fitenenana aritmetika. +
Tehirizo ny fikirakirana fifampiresahana Import Text ho an'ny lahatsoratra ao anaty tsanganana ary apetaho avy amin'ny Clipboard ny lahatsoratra tsotra (ankoatry ny fanafarana rakitra an-tsoratra)
mandefasa mizana mizana sy bara data any XLSX (Excel koa dia manohana ny fanitarana 2010+ ho an'ireo databars).
Fampitomboana ny fetran'ny habe (tsy voafehy) ho an'ny antontan-taratasy ODF manomboka amin'ny 2GB ka hatramin'ny 4GB.
Tohano ny fikarohana "soraty mialoha" ao amin'ny autofilter pop-up. Azo atao izao ny mitady fidirana manokana amin'ny alàlan'ny teny lakile
Tsaroana izao ny satan'ny tontonana eo amin'ny tontonana ao amin'ny Impress.
Fanafainganana ny fomba fijery amin'ny haino aman-jery, ary ny topi-maso amin'ny horonan-tsary tafiditra.
Hatsarao ny hatsaran'ny topi-maso amin'ny pejy amin'ny Draw with supersampling.
Amin'ny sehatra rehetra ankoatran'ny Windows dia misy rindrambaiko mpamily mork vaovao ampiasaina hidirana amin'ny boky adiresy Thunderbird. Midika izany fa ny mpampiasa Debian / Ubuntu dia afaka mampiditra LO amin'ny bokin'ny adiresy Thunderbird amin'ny farany. (Debian / Ubuntu distros raha tsy mandefa mpamily mork any Mozilla, ka tsy afaka miditra amin'ilay boky adiresy ny fonosanao Base base.) Io koa dia manamboatra bibikely taloha be ho an'ny fizarana samihafa.
Fanohanana ny protokolan'ny CMIS hanamorana ny fidirana amin'ireo antontan-taratasy voatahiry ao amin'ny rafitra fitantanana atiny toa an'i Alfresco, Nuxeo, SharePoint.
Fampidirana installer session hanampiana ampahany tsy hita ao amin'ny LibreOffice amin'ny sidina
Raha mila fanazavana fanampiny. http://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.0
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Inona no vaovao ao amin'ny Libreoffice 4.0
Fantatro fa zavatra tsara dia tsara no ho tonga miaraka amin'ity suite ity, aleoko kokoa noho ny hafa tsy misy fisalasalana. Ary heveriko fa ho lasa mahazatra ny doka toy ireny ...
Vaovao tsara, arahaba !!! ...
Ny marina dia manana fitomboana tsara sy maharitra ary maharitra izy, ny zavatra dia hitohy arak'izay misy azy ireo. Tsara raha tsy niasa tamin'ny Calligra intsony i KDE ary nanomboka niara-niasa tamin'i LO, saingy tsy nisy, sehatra hafa io.
Mahaliana. Manantena aho fa nohatsarain'izy ireo ny olana mifanentana eo amin'ny MS Office sy LO.
Amin'ny tenany dia saika tonga lafatra raha toa ny extensions .doc .ppt sy .xls no ampiasaina fa tsy ireo izay mifarana amin'ny (x), izany hoe .docx, sns.
Tiako ireo fanovana ireo, hanampy ahy be ny sasany hehehe ... na izany aza tiako ny hanatsara ny fifandanjana amin'ny fanokafana sy fitehirizana rakitra ao DOCX sy ny hafa
Raha manitsy ilay hadisoana lehibe amin'ny fampifangaroana ny lohateny Heading sy Heading izy ireo, fanovana natolotr'izy ireo tao amin'ny LibreOffice 3.6, dia mieritreritra ny hiverina aho. Nahazo korontana rakitra an-taonina aho tamin'io fanovana kely io. Mandritra izany fotoana izany dia mbola faly amin'ny OpenOffice aho, fa ho an'ny fampiasana izay omeko azy dia mihoatra ny ampy (tsy tantiko ny rakitra Word ary rehefa sendra iray aho dia ampiasaiko ny Office Web Apps)
Mameno ny hevitro aho, izay efa nahasosotra ahy 😛 Tsy mahita fanovana lehibe handinihana ity kinova vaovao ity aho, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao. Andao hojerentsika ny fivoarany mandritra ny fampandrosoana.
Ho lasa kinova 3.7 io, toa anao ihany, tsy hitako izay antony hanovana ilay kinova.
Ary ny interface graphique, rahoviana izy io? Ilaina maika ny fanovana an'io tarehy efa antitra io izay mila fotoana maharitra ...
Eny, na ny google docs aza dia manana interface tsara sy tsara kokoa
Tsy maintsy mamorona sehatra misy sary miaraka amina tranomboky mifanaraka amin'ny Gtk 3 (GNOME 3) sy Qt 4.9 (KDE) izy ireo… izany no mahatonga ny LibreOffice ho ratsy tarehy amin'ny KDE sy GNOME. LibreOffice dia mampiasa tranomboky VCL any Borland izay manana widget ratsy. Widgets (bokotra, baraovana, menus, sns) …… ..Nanoratra mockup iray nosoratana tamin'ny C aho izay mampiasa ny tranomboky Gtk 3… ..Fa tsy maintsy mianatra bebe kokoa amin'ny forum aho ary poloney bebe kokoa… .. http://www.youtube.com/watch?v=jnDuIJ0wLyI
Tsy misy isalasalana fa mila "tanan'ny saka" eo amin'ilay interface izy, saingy tsikelikely, manatanteraka ny iraka ampanaovina azy, tsy misy sakana amin'ny fanavaozana isan-kerinandro na ServicePacks.
Raha jerena tanteraka i Gerardo, dia mampihoron-koditra ny interface ary tsy niova firy nandritra ny taonjato maro (eny, mihoa-pefy). Maneho hevitra aho satria ny Google Docs ohatra dia manana interface madio sy mazava ary Caligra (biraon'ny birao KDE) koa milamina sy mitandrina tsara.
Andao hanantena fa ny bandy avy amin'ny libreoffice dia manapa-kevitra ary tsy hanome azy tanana saka, fa kosa ho an'ny tigra satria maika ny marina.
Araka ny nolazaiko hatrizay, manomboka manova ny interface ianao, na mandefasa sketsa azy ireo hanova an'io interface io "mampihoron-koditra" ary aza mijanona ao ambadiky ny birao mitaky sy mangataka ary manome kely dia kely.
Hevi-diso io, tsy ny rehetra no mety ho mpamorona na hanome vola ary tsy manaisotra ny zon'ny olona hanana hevitra mitsikera izany.
Nandefa ny fanesoako aho…. eo amin'ny latabatra fifanakalozan-kevitra…. http://www.youtube.com/watch?v=jnDuIJ0wLyI (Mampiasa tranomboky GNOME aho)… .. Fa ny olana dia ny tranomboky borland VCL izay ampiasaina amin'ny LibreOffice GUI… natao ho an'ny WINDOWS izy ireo ary ankoatry ny natao ho an'ny WINDOWS dia manana WIDGET (bokotra, baraovana sns)… Ratsy ny WIDGETS amin'ny endriny any borland… ..
ilay iray avy ao amin'ny Gdoc dia nampatsiahy ahy ny sarisary Libreoffice vitsivitsy izay tany
tena tsara, raha ny hevitro, libreoffice dia fitaovana birao lehibe izay tokony hampiasa ny olona rehetra fa tsy ilay birao ms, tamim-pahatsorana no nitiavako hatramin'ny fotoana voalohany niaraka tamin'ny libreoffice, probig calligra ary ummm ... Tsy namela tsiro ratsy tao ny vavako. Tiako izany fa tsy nahazo aina aho fa niaraka tamin'ny libreoffice uffff dia mandeha amin'ny zavatra rehetra izahay!
Raha hain'izy ireo ny manao ny tsipika lava sy fohy dia tsy isaina ho teny ary ankoatr'izay, ny programa dia manazava fa rehefa misy teboka lava mifatotra amin'ny teny dia tsy tokony hampisaraka azy (satria maneho izany fa fifanakalozan-kevitra) namely hira teo am-bavako aho. Mety ho lavitra (ho ahy sahady izany) no mpanamboatra teny tsara indrindra. Raha tsy diso aho, ny fomba itondrako ny lahatsoratra dia tsy mandraka androany, na M $ Office, na mpanodin-teny hafa fantatro.
Mety ho rendrika ho ahy izany. Ny olana dia satria ny fampiasana ny tsipika hisolo tena ny fifanakalozan-kevitra dia zavatra iray izay tsy ampiasaina amin'ny fiteny rehetra, dia sarotra ho an'ny olona iray ny mampihatra an'io fampiasa io indray andro any. Ny fiheverana indrindra fa amin'ny teny Anglisy indrindra izay tsy idiran'ny fifampiresahana eo anelanelan'ny hyphen, raha tsy eo anelanelan'ny teny nalaina.
Betsaka ny voalaza momba ny interface…. fa tsy hitako izay manome hevitra momba ny lalana tokony haleha. Miahiahy aho fa mieritreritra ny hanome azy io amin'ny Microsoft ny rehetra, izay etsy andaniny, mampatahotra ahy. Tsy tiako ny interface ary raha miahiahy momba ny herinaratra, mifanentana, hafainganam-pandeha aho, ... Miaraka amin'ireo kisary vaovao ary manafoana ny làlan'ny java rehetra (izay mampiadana ny zavatra rehetra kasainy) dia ho tsara kokoa ny fijerin'ny zavatra. Raha ny fanazavana, efa voavaha efa ela ny sary masina ary azo tratrarina ny endrika hatsaraina. Ny zava-misy fa ny tarehy dia nitovy nandritra ny fotoana ela dia tsy manimba azy ary tsy mila miova ianao.
Avy eo dia tsy ho tianao ny MOCKUP izay noforoniko tamin'ny fampiasana ny tranomboky Gtk 3. (tranomboky izay ampiasain'ny GNOME 3.) Tsy maintsy vitako io fa ataoko tsikelikely ... http://www.youtube.com/watch?v=jnDuIJ0wLyI … ..Maro no milaza fa kopia ratsy amin'ny Ribbon OFFICE… Saingy voafetra miaraka amin'ireo tranomboky Gtk 3 sy ny fananany aho.
Raha tsy voavahan'izy ireo tao amin'ny pejin-tranonkala ny olana copie & paste dia tsara kokoa raha tsy miresaka momba ny tsimbadika vaovao aza izy ireo ...
tena mbola miasa mafy ny copie sy ny paste, tsy maintsy vonoinao, nnnaaa efa teo izay, tsy maintsy ampiharina nefa tsy mandehandeha manao fihetsika juggling be loatra. 🙂
Ary tsy izany ihany fa, amin'ny takelaka dia misy zavatra maromaro izay tsy azonao atao, ohatra, manisy marika andalana maromaro, manapaka azy ary mampiditra azy amin'ny toerana hafa, voatery manisika aloha ireo laharana banga ianao ary avy eo mandika ny atiny ... manelingelina be mihitsy.
Ireo no zavatra mametra ny isan'ny olona mifindra monina amin'ity fonosana ity indraindray.
Ny antenaiko hampiasa ny Office Book dia ny hanomezan'izy ireo endrika ny UI izay efa somary lany andro ary manatsara ihany koa ny hafainganam-pandehan'ny asa, ireo interface an'ny webapp sy Microsoft Office dia manohy manavao ny tsena, mpampiasa birao manome lanja fatratra ny interface an'ny rindranasa ampiasainy isan'andro.
Ho an'ny mpanoratra dia tsy misy dikany ny interface.
Ho an'ireo izay mamoaka lahatsoratra maharitra, tsy mahazo aina mihitsy ny manetsika ny tànany mankamin'ny totozy hanao zavatra, raha ny tena izy dia azo atao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny zava-drehetra.
Amin'io lafiny io, WordPerfect (ho ahy ny mpandaha-teny tsara indrindra amin'ny tantara, farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny andiany 9), dia be dia be ny zavatra ampianarina.
Mba hanomezana ohatra iray monja, ny fametrahana indente frantsay amin'ny WordPerfect dia mitaky ny fametrahana ny kursor eo am-piandohan'ny fehintsoratra ary ny fanindriana ny F4.
Ao amin'ny OO sy LO dia fandefasana ranomaso.
Fandaharana WordPerfect iray hafa izay tsy haiko dia ny "Format Painter", natomboka tamin'ny taona 1999, izay ahafahan'ny olona mandany fotoana amin'ny famolavolana lahatsoratra ary avy eo, miaraka amin'io fiasa io, dia adikao tsara ilay endrika amin'ny alàlan'ny fandokoana fotsiny ny lahatsoratra kendrena amin'ny totozy.
Raha fintinina dia misy fiainana any ankoatry ny MS Office ... ary ny tanjona dia ny hanao vokatra tsara ho antsika izay manoratra fa tsy "mpisambotra mpampiasa MS Office" fotsiny.
Fa atao inona ny takelaka?
Andao hampiasa Linux izay efa manana Unity Lens!